Sida loo soo dejiyo Qalabka Daemon bilaash | Androidsis
Ignacio Sala | 11/07/2021 18:00 | La cusbooneysiiyay 16/07/2021 00:32 | Qalabka kale, Tababarada
Inkasta oo qalabka kombiyuutarka badankood, desktop iyo la qaadan karo labadaba, kuma sii darin DVD player, qaabkan ayaa wali si weyn loogu adeegsadaa shirkadaha qaar gaar ahaanna tiro aad u tiro badan oo adeegsadayaal ah.
Haddii aad si joogto ah ama si goos goos ah ula shaqeyso qaabkan keydinta, waxaad u maleyneysaa inaad aqoon u leedahay barnaamijka Daemon Tools, mid ka codsiyada ugu fiican si loo abuuro loona soo celiyo sawirada qaab ISO ah, codsi ku habboon in lagu sameeyo nuqullo nuqul ah waxyaabaha ugu qiimaha badan.
1 Waa maxay Qalabka Daemon
1.1 Awoodaha Qalabka Daemon
2 Maxaan ku samayn karnaa Qalabka Daemon
2.1 Tafatir waxyaabaha ku jira sawirada ISO
2.2 Hard Drive-ka Virtual
2.3 Hindisaha ISCSI
2.5 Isdhexgalka Windows
3 Sida loo soo dejiyo Qalabka Daemon bilaash
4 Beddello bilaash ah Qalabka Daemon
Waa maxay Qalabka Daemon
Qalabka Daemon waa mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran ee hadda laga heli karo suuqa markay tahay fulinta nuqulada saxda ah ee waxyaabaha ku keydsan warbaahinta jirka sida CD-yada iyo DVD-yada. Inkasta oo aragtidu markii hore tilmaamtay in muddada ay jiritaankan jir ahaaneed ay ka sarreyso tan disk-ka adag, haddana ma jiraan wax xaqiiqda ka fog.
Nasiib darrose, qaabkani waa muujiyey noqon tayo aad u hooseeya oo iyagu si fudud ayey u xoqdaan, markaa si dhakhso leh ayaynu u waayi karnaa waxyaabaha ku kaydsan iyagoon xitaa garanayn. Markaan idhaahdo lumiya waxa ku jira, waxaan ula jeedaa inaynu luminayno weligood, maadaama dib u soo kabashada DVD-ga dhaawacan ficil ahaan aan macquul ahayn.
Halkani waa meesha Daemon Tools uu yahay saaxiibkeenna qumman. Haddii aad rabto waligaaba hay fiidiyowga arooskaaga, filimkaas oo aadan ka heli karin dukaan kasta oo qaab muuqaal ah ah, sawirada dhammaan safaradaada, fiidiyowyada aad ugu jeceshahay… waa inaan marwalba haysannaa nuqul keyd ah.
Haddii ay ku jirto qaab ISO ka fiican sidii hore, tan iyo qaabkan, oo ah nuqul isku mid ah dhammaan waxyaabaha ku kaydsan miisaanka jirka, waan awoodnaa si fudud ugu soo celi disk kale, si had iyo jeer loo helo keyd.
Haddii aad raadineyso codsi kuu oggolaanaya la shaqee CD-yada iyo DVD-yada, mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee hadda laga heli karo suuqa waa Daemon Tools, oo ah codsi aan ku soo dejisan karno bilaash, laakiin taasi waxaa ku jira taxaddarro xaddidan haddii aynaan hore u iibsan.
Awoodaha Qalabka Daemon
Ku dar erey sir ah sawirada lagu abuuray arjiga ama sawirada lagu abuuray barnaamijyada kale.
Waxay na siisaa a dulucda iftiinka iyo dulucda madow, tan dambe ayaa ku habboon marka aan ku shaqeyno iftiinka jawiga hooseeya.
Waxay noo ogolaaneysaa inaan la shaqeyno ilaa 4 darawallo dalwaddii kala duwan.
Faylka Waafaqsan TrueCrypt
Faylka Waafaqsan VHD
La jaan qaada qaabab muuqaal ah: ISO, MDS, B5T, CDI, B6T, MDX, CDI, BIN / CUE, APE / CUE, FLAC / CUE kuwa kale.
Biblioteca meesha aan ka heli karno dhamaan sawirada aan abuurnay ama aan ku keydinay kumbuyuutarkeena.
Maxaan ku samayn karnaa Qalabka Daemon
Sidaan uga faallooday qaybtii hore, Qalabka Daemon waa mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran markaad la shaqeyneyso feylasha qaab ISO ah. Si kastaba ha noqotee, marka lagu daro abuurista iyo soo celinta sawirrada qaabkan, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan qabanno howlo badan sida:
Tafatir waxyaabaha ku jira sawirada ISO
Sidan oo kale, waan awoodnaa ku dar ama ka saar faylasha cusub ee la keydiyay sawirka ISO. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku darno lambar sir ah haddii aan rabno inaan ka hortagno waxyaabaha ku jira inay ku dhammaadaan gacmo qaldan.
Hard Drive-ka Virtual
Shaqadani way noo oggolaanaysaa isticmaal oo samee aalad adag oo adag, Weelasha TrueCrypt iyo noocyada kala duwan ee RAM (Random Access Memory) saxannada.
Thanks to shaqadan, waan awoodnaa ku xir qalabka iSCSI oo isticmaal sawirada fog, darawallada adag ee adag iyo unugyada keydinta jirka sida haddii ay jir ahaan ku xiran yihiin kombuyuutarkeena.
Mid ka mid ah howlaha ugu soo jiidashada badan codsigan ayaa ah suurtagalnimada helitaanka waxyaabaha ku keydsan sawirrada qaab muuqaal ah ka soo qaad aaladaha moobaylka ee loo yaqaan Catch.
Haddii aan sida caadiga ah ku shaqeyno qaab feylkaan ah, waxaan fursad u leenahay ku dhex dar arjiga nidaamka hawlgalka Windows, si aan uga wada helno dhammaan xulashooyinka ay na siineyso menusyada macnaha guud leh ee la soo bandhigo markii aan riixno batoonka midig ee midig.
Dhowr sano ka hor, codsiyada la heli karo ayaa lagu kala saari karaa freeware o Shareware. Codsiyada bilaashka ah ayaa si buuxda loo soo bandhigay oo codsiyo gebi ahaanba bilaash ah, oo aan hadda ugu yeerno il furan.
Codsiyada Shareware ayaa ahaa barnaamijyada tijaabada ah in aysan ku darin dhammaan shaqooyinkiisa ama aan u isticmaali karno oo keliya dhowr maalmood illaa iyo inta uu arjigu joojinayo inuu shaqeeyo haddii aanan iibsan.
Qalabka Daemon waa codsi noocan oo kale ah. Iyadoo ay run tahay inaan awoodno Soo dejiso Qalabka Daemon gebi ahaanba bilaash, noocaan, baabtiisay sida Lite, waxaan si xad dhaaf ah u xadideynaa tirada howlaha la heli karo, sidaa darteed ilaa aad ka bixiso lacagta mooyee, ficil ahaan ma awoodi doontid inaad wax ku qabato.
Qiimaha barnaamijka Daemon Tools Pro waa 64,99 euro, qiimo aan u qaadan karno mid ku filan haddii aan ka faa'iideysaneyno howlaha ay na siiso, waana jiraan kuwo badan.
Nasiib darrose xaalku sidaas maahan, sidaa darteed Laga soo bilaabo Forum-ka mobilada kuma talinayno iibsashada, maaddaama aan ka heli karno beddello il furan oo isku mid ah oo ansax ah oo gebi ahaanba bilaash ah.
Beddello bilaash ah Qalabka Daemon
Haddii baahiyahaagu maraan abuur oo fur faylasha qaabka ISO, mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee la heli karo ayaa ah WinCDEmu, codsi sidoo kale ah ilo furan, markaa waxaan u isticmaali karnaa gebi ahaanba bilaash oo aan xad lahayn.
WinCDEmu waxay taageertaa faylasha qaab ahaan ISO, CUE, NRG, MDS / MDF, CCD, IMG ... Kuwa kale, waxay kuxirantahay Windows XP, waxaa jira nooc la qaadan karo (looma baahna in lagu rakibo kumbuyuutarka meesha aan u adeegsan doonno), wuxuu la jaan qaadayaa Blu-ray, DVD iyo CD drives, waa loo tarjumay Isbaanish mana bixinayno xaddidaad marka la abuurayo darawallo dalwad ah
Hadaad kaliya rabto la shaqee faylasha qaabka ISO, waa inaad siisaa barnaamijka isku day ISODisk, codsi gebi ahaanba bilaash ah oo noo oggolaanaya inaan kor u qaadno illaa 20 sawir oo wada jir ah, DVD-yada iyo CD-yada loo beddelo qaab-dhismeedka 'ISO' oo laga helo Windows XP (wuxuu u baahan yahay 64 MB oo xusuus ah, Intel Pentium 166 MHz ama 10 MB oo kayd ah).
Sida barnaamijkii hore, ISOBuddy waxay kaliya noo ogolaaneysaa inaan ku abuurno sawirada ISO laakiin waxay ku habboon tahay GI, ISO, NRG, CDI, MDF, IMG, DVD, B5I, B6I, PDI, BIN, CCD, qaababka DMG iyo kuwa kale.
ISOBUddy waa codsi aan kari karno soo dejiso gabi ahaanba bilaash, kuma jiraan nooc kasta oo xaddidaad ah marka la eego howlaha waxayna na siisaa tiro badan oo xulashooyin ah marka aan abuureyno feylasha qaabka ISO.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Sida loo soo dejiyo Qalabka Daemon bilaash
Top 5 Toosh Apps ee loogu talagalay Android
25-ka kulan ee ugu fiican waxqabadka ee Android